Wirless Potable Printer
chevron_right Bluetooth Printers
chevron_right Wirless Portable Printer
- ချစ်သူနဲ့ ခရီးသွားရင် ဓါတ်ပုံ တူတူရိုက်ပြီး sticker အနေနဲ့ ထုတ်ခြင်းလား ၊ နှစ်ယောက်အတူ ပုံလေးထုတ်ပြီးဆေးချယ်ခြင်သလား ၊
$56.23 ($34.98 for 10 pcs) $85.20 -34%
Cost: 57 coins
- Color Paper နဲ့သုံးမလား ၊ Water Proof paper နဲ့သုံးမလား စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်ပါတယ်။အလွယ်တကူ QR Code လေးထုတ်ပြီး ကိုယ်အကောင့်ကို ပြခြင်လား ၊ စရင်းအင်းအတွက် မှတ်တမ်းအဖြစ်သုံးခြင်းလား ၊ နှစ်ဖက်လှ ပုံလေးတွေထုတ်ခြင်းလား စိတ်ကြိုက် အသုံးပြု လို့ရတဲ့ အိပ်ဆောင် Printer လေးနဲ့မှိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အ ရေးပေါ် စာရွက်ထုတ်ပြဖို့လိုအပ် နေလို့ Printer ဆိုင်ရှာဖို့ ခက်နေပါသလား ? Online Ticker အတွက် ပုံလေးထုတ်ပြီး ပြခြင်ပါသလာ;?
- - ပုံများ ၊ စာသားများ ၊ လိပ်စာ ကတ်များ ၊ voucher နင့် မှတ်သားထားသော အချက်အလက် ( Short Note ) များကိုBluetooth ဖြင့် မည်သည့် ဖုန်းနှင့်မဆို ချိတ်ဆက်ပြီး black & white နှင့် Gray scale ချက်ချင်း ထုတ်လိုက်နိုင်သေား ကင်မရာ လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- မည်သည့်နေ့ရာတွင်မဆို လမ်းသွားရင် အလွယ်တကူ Print ထုတ်ယူနိုင်ရန် ဘက်ထရီလည်းပါဝင်ပါတယ်။
- - ဘက်ထရီ အား တစ်ခါသွင်းထားလျှင် paper လိပ် ၄ လိပ်ထိ ကုန်အောင် print ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ စကူလိပ်သာ ထည့်ပြီးးဆေးထည့်စရာမလိုဘဲ print ထုတ်နိုင်သေား printer လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- - မိမိ အိတ်ထဲ ထည့်ထားကာ။ ပါဝါ stand by on ပြီးးကို ဖုန်းထဲမှ အမှတ်တရများကိုချက်ချင်းထုတ်ပေးနိုင်ပြီ်းး ထုပ်ထားသေား ပုံမျာ ကိုးကိ နံရံတွင်ု အလွယ်တကူ ကပ်ထားနိုင်သေား printer လေးပဲဖြစ်ပါတယ်း ဆော့ဝဲလေး ဖုန်ထဲထည့်ပြီး အသင့်လုပ်ထားသော pattern များ design များကို ထိုဆော့ဝဲထဲတွင် ဓါတ်ပုံများနှင့်တွဲဖက်ပြီး လိုသလို edit လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ -
- အသုံးပြုပုံ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး bluetooth နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ android ဖုန်း၊ I-phone ၊ ကွန်ပြူတာ များနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။